တိဘက် လူငယ် မီးရှို့ ဆန္ဒပြ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » တိဘက် လူငယ် မီးရှို့ ဆန္ဒပြ
တိဘက် လူငယ် မီးရှို့ ဆန္ဒပြ
Posted by Charm Boy on Mar 30, 2012 in News, World News | 22 comments
Tibetan exile Janphel Yeshi, 27, runs as he is engulfed in flames after he set himself on fire duringaprotest in New Delhi on March 26, 2012. A Tibetan exile set himself on fire on Monday duringarally in New Delhi to protest against an upcoming visit to India by Chinese President Hu Jintao, police said. AFP PHOTO/STR
ဘာတောင်းဆိုချင်တာလဲမသိဘူးနော် “ဇ” ကတော့အပြင်းသားကလား
ပုံ က ရှင်း နေတာပဲ။
ပုံမှာ ပထမ တုန်းက တော်တော် မာန်တင်း နေတဲ့ ပုံပဲ..
အောက်ဆုံး ပုံလောက်မှာတော့ မသေလောက်သေးဘူး တော်တော် နာကျင်နေလိမ့်မယ် ထင်တယ်။
အသက်မသေခဲ့ရင်တော့ ဝေဒနာတွေ အမြန်ဆုံး ပျောက်ကင်းပါစေ။
Oh.. man ! unbelievable !
ဘုရား…ဘုရား…ဘုရား ….အင် အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ
သတ္တ၀ါတွေ ဘေးရန် ကင်းကြပါစေ၊ စိတ်ဆင်းရဲ ကင်းကြပါစေ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲ ကင်းကြပါစေ
တရုတ် သမ္မတ ကိုဘယ်လောက် များမုန်း နေလဲမှ မသိတာ
သူ့ကိုယ့်သူ အနာခံပြီးတော့များ ဘာတွေကိုတောင်းဆိုချင်ရတာပါလ်ိမ့်
ပုံတွေကြည့်ပြီး ဒီလူရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ကို မြင်မိပါတယ်……….. အပေါ်ပုံတွေမှာ သူရဲ့ ခံနိုင်ရည်အားကို အံကြိတ်ပြီးခံနိုင်နေပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာ သူအရေပြားဘယ်လောက်တောင် ပူပြင်းနေလိုက်မလဲဆိုတာ ခံစားကြည့်လိုက်ကြစမ်းပါ…………….
သားရေ ပူဘူးတော့်…………သားရေ့ ပူဘူးတော့်………..
အိန္ဒိယကိုလာမယ့် တရုတ်သမတ ဟူကျင်တောင်းကို ဆန္ဒပြတဲ့ အနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မီးရှို့ခဲ့တဲ့ တိဗက်လူငယ် ဂျန်ဖယ်လ်ရာရှီဟာ ဒီနေနေ့လည်မှာပဲ သေဆုံးသွားပါပြီ။
သတင်းကို ပုံများနဲ့ ပြန်လည် ဝေမျှပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ။
အဲလောက်ကြီးတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် မညှင်းဆဲရဲဘူးတော့
Ghost Rider ညီ Ghost Runer
ကြည့်ရတာ စိတ် မကောင်းလိုက်တာ။ အာရပ်တ်ာလှန်ရေးရဲ့အစကလည်း ဒီလို ပဲ သစ်သီးသယ် ကောင်လေး မီးရှို့ သတ်သေ သွားရာကစခဲ့တာဆိုတော့ ဒီလူရဲ့ စွန့်စားမှုကိုလည်း အလဟသ မဖြစ်စေဖို့ ဆုတောင်း ပေးပါတယ်။
ဘုရား.. ဘုရား….. ရက်ရက်စက်စက်ကွယ်…. မကြံကောင်း မကြံစည်ရာ…..
မြန်မာပြည် ကအစိုးရ ဆိုသူများ လဲသတိထား ကြပါ။ လူဆိုတာ အရမ်းဖိနိပ်ခံ ရပြီး ထွက်ပေါက် မရှိတော့အချိန် သေရမှာ တောင်မကြောက် တော့ရင် ဘာမဆိုလုပ် ဖို့ဝန်မလေး ကြဘူးဆိုတာ။ ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး အခုအချိန် ထိစောက်ကျောတင်း ချင်သေးတဲ့ လူကြီး ဆိုသူတွေ ကိုယ့်ဇက် လေးကိုပွတ် ပြီးစဉ်းစား နိုင်အောင်လို့ ပါ။
လူဆိုဒါ ကိုယ့်ခံယူချက်တွက် လုပ်ရဲကိုင်ရဲရတယ်
Chinese authority should give the freedom or independent to the Tibet State.
မြန်မာပြည်မှာလည်း၊ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်မှာ အဲလိုဖြစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးတဲ့ န၀တ လက်ထက်မှာပါ၊
ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှု၊တရားမဲ့မှု၊ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှု၊လူလူချင်းမေတ္တာမဲ့မှုတွေကြောင့်လောင်မျိုက်ကြရတဲ့မီးဟာ ပိုကြောက်ဘို့ကောင်းလာတော့ ရခဲတဲ့လူ့ဘ၀ကိုတောင်ဆုံးရှုံးဘို့မကြောက်တတ်တော့ပါဘူး။
ဘာတွေများ ဘယ်လောက်ခံစားထားရသလဲလို့ စဉ်းစားမိတယ်။
ဒီနည်းအပြင် ဒိပြင်နည်းနဲ့ တုန့်ပြန်ရင် ပိုကောင်းမလားလို့။
ထိခိုက်ခံစားရလွန်းလို့ အခုလိုမျိုး တုန့်ပြန်တာဆိုရင်
ကိုယ့်ရဲ့သူတပါးအပေါ် ပြုမူခဲ့တဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့လုပ်ရပ်ကို
ဖွဲမီးလို တငွေ့ငွေ့ လောင်ကျွမ်းသွားနိုင်တယ်။
စဉ်းစားလိုက်ရင် နှစ်ဖက်စလုံး ဆုံးရှုံးနစ်နာပါတယ်။ :”(
ဘာတောင်းဆိုတာလဲဟုတ်လား။ စစ်တပ် မရှိပဲ ဘုန်းကြီးတွေ အုပ်ချုပ်တဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ တိဗက်နိုင်ငံကို တရူတ် တွေ ၁၉၅၀ကျော် နှစ်က ကျူးကျော် သိမ်းပိုက် ထားတာ ကို လွတ်လပ်ရေး ပြန် ရဘို့ ဆန္ဓပြနေတာပေါ့။